ဆွံ့သူကြား၍ကြားသူလမ်းမြင် မြင်သူရှေ့တိုးအသိနိူးဖို့ ရေးထိုးလိုက်တဲ့ရွှေအိမ်စည်အဘိဓာန်
စာများကို မြန်မာ အက္ခရာဖြင့်ရှာဖွေရန်* အများအကျိုးပြုခြင်းဖြင့်ပျော်ရွှင်မှုရပါစေ...။ (မည်သူမဆို မျှဝေယူနိုင်ပါသည်- ရွှေအိမ်စည်)
စာများကို မြန်မာ အက္ခရာဖြင့်ရှာဖွေရန
Shawn Mendes ft Camila Cabello - Señorita (Lyrics)
💥 Shawn Mendes ft Camila Cabello - Señorita (Lyrics)
💥Songs are the great sources for learning English.
You may spendalot of time listening your favorite songs in your phone, but have you ever thought that you can learnalot from your interest or from something you enjoy most?
You may never think that.
First things that comes to your mind when you want to learn English is you want to findagood English class andateacher.
But you forget you can learn just by yourself. Self-study is the most important of learning development.
You joined the most well-known English class and get lectures from the best teacher and you are still feeling like you are not developing in listening, speaking and understanding of what others say.
It is why I highly recommend that you learn English by listening music and some other sources.
Posted by ရွှေအိမ်စည်စြာ့ည့်တိုက်
at 5:48 AM Labels: သီးချင်းထဲကအင်္ဂလိပ်​စာ0comments
Well ကို အာမေဋိတ် အဖြစ်သုံးတဲ့အခါ ထူးဆန်းတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေ များစွာမှ များစွာ
Well ကို အာမေဋိတ် အဖြစ်သုံးတဲ့အခါ ထူးဆန်းတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေ များစွာမှ များစွာ ............................................................................... ဒီ well ဆိုတဲ့စာလုံးလေးက word form အမျိုးမျိုးရှိပြီး အာမေဋိတ်အဖြစ်သုံးလျှင်တော့ ၀ါကျအနေအထားပေါ်မူတည်ပြီး အဓိပ္ပါယ်တွေ တစ်လှေကြီး ဖြစ်နေပြန်ပါတယ် အဲဒီအထဲကနေ အလျှဉ်းသင့်ရာလေးတွေ ရွေးပြီး တင်ဆက်လိုက်ပါတယ် ။ သူ့အဓိပ္ပါယ် တချို့ကို စီပြီး ရေးကြည့်မယ်ဆိုလျှင် . (adv) ကောင်းစွာ ၊ တော်တော်လေး (adj) နေကောင်းသော ၊ ကျန်းမာသော (n) ရေတွင်း ၊ ရေနံတွင်း (v) လျှံထွက်ကျသည် (intj) ကိုင်း ၊ ကဲ (အံ့သြခြင်း ဒေါသဖြစ်ခြင်းကို ပြဖို့) ...... တော်ပါသေးရဲ့ ( စိတ်သက်သာရာ ရခြင်းကို ပြဖို့) ...... အင်းလေ (မတတ်သာ၍ လက်ခံရသည့် သဘောကို ပြဖို့) ...... ကောင်းပြီလေ ၊ ဟုတ်ပါပြီ (လက်ခံကြောင်း ၊ နားလည်ကြောင်းပြဖို့) ...... အေးပါ ၊ အင်းပါ (စိတ်မပါ့တပါနဲ့ သဘောတူကြောင်း ပြဖို့) ...... အော ၊ အင်း ၊ အဲ ၊ ကဲ ( စကားစပြန်ကောက် ၊ စကားလမ်းကြောင်းပြောင်း ၊ မသေချာဇဝေဇ၀ါဖြစ်ကြောင်းပြ ၊ စကားလက်စသတ် ) ဖို့တွေ ...... အဲလေယောင်လို့ (ဘွာခတ်ကြောင်းပြောဖို့) ... စသည်ဖြင့် ရေးလို့တောင် မဆုံးနိုင်တဲ့ အာမေဋိတ် အသုံးတွေ အဘိဓါန်မှာ ရှိနေပါတယ် ။ အကုန်လုံး ဒီမှာ ပြန်ကူးရေးလျှင် ဖတ်ဖို့ပျင်းကုန်ကြပါလိမ့်မယ် ။ စာလုံး တစ်လုံးတည်းကနေ အမျိုးမျိုး ရနေတော့ ဘာသာပြန်ရတာဂွကျ နေတတ်တဲ့အတွက်လည်း ၀ါကျဆောက်နည်း စာအုပ်လေးထဲကနေ တွေ့တာလေးကိုပဲ တင်ဆက်လိုက်ပါတယ် .. ... (1) Well ကို.. ဖြေဖို့ အဆင်မပြေတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုကို ယတိပြတ်မဖြေဘဲ အနည်းငယ် အချိန်ဆွဲကာ ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်လုပ်ပြီး တုန့်ပြန်ဖို့ အတွက် သုံးနိုင်ပါတယ် Well can be used to stall foralittle time, often in response toadifficult or uncomfortable comment. For example: ... (1.1.a) I expect you in my office in an hour. ခင်ဗျား ကျနော့်ရုံးခန်းကို နောက်တစ်နာရီမှာ လာစေချင်ပါတယ် (1.1.b) Well, let me check my calendar. အင်း .. ဟိုလေ.. ကျနော် ချိန်းဆိုလက်ခံထားတဲ့ အချိန်စာရင်းလေး ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ် ... (1.2.a) Can you answer my question? ခင်ဗျား ကျနော့်မေးခွန်းကို ဖြေကြားပေးနိုင်မလား (1.2.b) Well, let me think about that foramoment. အဲ.. ဟိုဟာလေ .. အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခဏတစ်ဖြုတ်လောက် စဉ်းစားပါရစေဦး .................................................................................... (2) အံ့သြမှုကို ဖေါ်ပြတဲ့ ၀ါကျတစ်ခုကို စတင်ဖို့အတွက်လည်း သုံးပါတယ် ။ အာမေဋိတ် မပါဘဲ အံ့သြမှုကို ဖေါ်ပြနိုင်သလို well ပေါင်းထည့်ခြင်းဟာ အလေးပေးဖေါ်ပြမှု သဘောကို ဆောင်ပါတယ် ။ It also introducesasentence that expresses surprise. Although surprise can be expressed without the interjection, the addition of well provides emphasis. . (2.1) Well, I certainly didn’t expect to getaspeeding ticket. အလိုလေး.. အမြန်နှုန်းပိုမောင်းလို့ ချလံဖြတ်ခံရမှာကို လုံးဝ မမျှော်လင့်ခဲ့မိပါဘူးဗျာ .......................................................................................... (3) စိတ်မရှည်မှုကိုလည်း ဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ် .. well အာမေဋိတ် ပါတာနဲ့ မပါတာကို နှိင်းယှဉ်ကြည့်ပါ In can also express impatience. Compare the following pairs of sentences: . (3.1.a) Are you ready? အဆင်သင့် ဖြစ်ပြီလား (3.1.b) Well, are you ready? ဟာကွာ .. အဆင်သင့် ဖြစ်ပြီလားကွ ............... (3.2.a) You’re going to be late again. ထပ်ပြီး နောက်ကျတော့မယ်နော် (3.2.b) Well, you’re going to be late again. ကဲ...... ထပ်ပြီး နောက်ကျဦးတော့မှာပဲ ............................................................................ ဘယ်လိုသဘော ဖြစ်တယ်လို့ သိပြီးတာတောင်မှ မြန်မာစကားလုံး ကွက်တိဖြစ်ဖို့ စဉ်းစားရကျပ်ခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒါ well ပါပဲဗျာ .. ...... ဝေါဟာရများ ... interjection (interj) အာမေဋိတ် stall (v) ယတိပြတ်မဖြေ ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်လုပ်၍ အချိန်ဆွဲသည် certainly (adv) ကြံကြံဖန်ဖန် ၊ ကြံကြီးစည်ရာ . Source: English Sentence Builder by Ed Swick . မေတ္တာဖြင့် heart emoticon Mine coins - make money: http://bit.ly/money_crypto https://web.facebook.com/winnaing.oo.79?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARBgmemQoYxSiuW6dC8sIPaO5uOlmDpL5k79CsQaMy8rcLg-zjC8QgO34jwJF4EXcjhdf6bx7up2MsPp&tn-str=%2AF
Posted by ရွှေအိမ်စည်
at 5:44 AM Labels: အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်စေရန်0comments
ဒီမိုကရေစီ (Democracy) ထက်သာတဲ့ အက်ဆိုကရေစီ (Aksocracy)
ဒီမိုကရေစီ (Democracy) ထက်သာတဲ့ အက်ဆိုကရေစီ (Aksocracy) ========================= နိုင်ငံရေးကို လေ့လာသုံးသပ်တဲ့အခါ ဘာတွေသိဖို့လိုသလဲဆိုတော့ ၁။ Who Governs? ဘယ်သူအုပ်ချုပ်သလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းပါ။ မြန်မာပြည်မှာ ဘုရင်တွေအဆက်ဆက်အုပ်ချုပ်ရာမှ သီပေါဘုရင်အပြီးကစလို့ လက်နက်အင်အားကြီးပိုင်နိုင်သူကပဲအုပ်ချုပ်ခဲ့တာပါ။ လက်ရှိပြည်သူ့အစိုးရဆိုပြီး တက်လာချိန်မှာတော့ Who governs? ဘယ်သူအုပ်ချုပ်နေလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းအတွက် သမ္မတလား၊ နိုင်တိုင်ခံလား၊ တပ်ချုပ်လား ဆိုတာ ဖြေဖို့ခက်လှပါတယ်။ ၂။ For what ends? ဘာရည်ရွယ်ချက်လဲ ဆိုတာ ဒုတိယမေးခွန်းပါ။ ဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ခြေဥပြင်ဆင်ရေးလို့ဆိုပေမယ့် လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကစားကွက်နဲ့ရလဒ်တွေအရဆိုရင် ရည်ရွယ်ချက်တွေက မှုန်ဝါးလွန်းနေလှပါတယ်။ ၃။ By what means? ဘယ်စနစ်သုံးလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းအတွက်တော့ Democracy လို့ပဲဖြေရမှာပါ။ Democracy စနစ်ဆိုတာ A system in which everyone is equal and has the right to vote, make decisions etc.လူတိုင်းအတွက် အခွင့်အရေးညီမျှမှုရှိပြီး မဲပေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတွေအတွက် ပြည်သူအများက အာဏာရှိစေရတယ်။ နောက်စနစ်တစ်ခုက အော်တိုကရေစီ Autocracy လို့ခေါ်တယ်။ သူက ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပြီး A system of government in which one person or group has unlimited power and it is completely controlled by one powerful personတဲ့။.အော်တိုကရေစီ ဆိုတာက အာဏာပါဝါမြင့်မားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကသာ လုံးဝဥဿုံထိန်းချုပ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးဟာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုပေမယ့် အော်တိုကရေစီထဲမှာပဲ နွံနစ်နေရဆဲလို့ ပြောလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီမိုကရေစီသဘောနဲ့လုံးဝကိုက်ညီတာက အစိုးရကို ပြည်သူတွေက ရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တယ်။ ပြည်သူတွေဆိုရာမှာ အသက်၁၈နှစ်အောက်နဲ့ သာသနာ့ဝန်ထမ်းတွေတော့ မပါဘူး။ ဒါပေမဲ့သူတို့လည်း ဥပဒေရဲ့အပြစ်ဒဏ်တော့ ခံရတာပါပဲ။ ကိုယ်မရွေးခဲ့သူရဲ့ ဥပဒေအတိုင်းနေရတာတော့ မပြည့်စုံဘူးလို့ ယူဆရတယ်။ ဒီမိုကရေစီနည်းအတိုင်း ပြည်သူအများဆန္ဒအမှန်နဲ့ရွေးချယ်ကြတယ်ဆိုပေမယ့် အုပ်ချုပ်သူအမှန်အကန်ကို မရခဲ့ကြဘူးဆိုတော့ကား လက်တွေ့အားဖြင့်ကြည့်ရင် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကလည်း အလုပ်မဖြစ်သေးဘူးလို့ဆိုရမယ်။ အုပ်ချုပ်သူလူတော်လူကောင်းတွေရဖို့ဆိုရာမှာ လက်ရှိအစိုးရက ပြည်ပက နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ငှါးရမ်းခေါ်ယူနေရတာတွေ့လာရတယ်။ ဝေလငါးကိုလိုချင်ရင် ရေအိုင်ထဲမှာ ရှာလို့မတွေ့နိုင်ဘူးဆိုတော့ကား ပြည်ပကငှါးရမ်းခြင်းကို မှားတယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုငှါးရမ်းမှုက ဈေးကြီးတယ်။ ရှာဖွေရတာ အလုပ်ပိုတယ်။ အများရွေးချယ်မှုလည်းမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့ လူတော်ပေမယ့် ယုတ်မာမှုက အဆစ်ပါလာတတ်တယ်။ လူတော်လည်း ရချင်တယ်၊ဖြူစင်ရိုးသားမှုလည်းရချင်တယ်ဆိုရင် လူတော်လူကောင်းရှာဖွေအုပ်ချုပ်စနစ် အက်ဆိုကရေစီAksocracy ကိုကျင့်သုံးလာရလိမ့်မယ်။ Aksocracy -asystem of government in which one noble and genious person or group has unlimited power and it is completely controlled by one noble and genious person or group. အက်ဆိုကရေစီစနစ်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်က နေရာဒေသအသားရောင်မခွဲခြားဘဲ ကိုယ်ကျင့်ဖြူစင်ပြီး ဉာဏ်ပညာကြီးမြင့်သူ လူတစ်စုက အုပ်ချုပ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ အများဆန္ဒကို အတည်ယူကြမယ်ဆိုရင် လူလိမ္မာ ၁ ယောက်ရဲ့အမှန်တရားကို လူမိုက်၂ယောက်ရဲ့အမှားက မဲနဲ့အနိုင်ယူလို့ရတဲ့စနစ် ဖြစ်နေတယ်။ အက်ဆိုကရေစီစနစ်က ကိုယ့်ကျင့်တရားကိုအခြေခံပြီး ဉာဏ်ပညာနဲ့သွားတဲ့စနစ်ဖြစ်လို့ အမှားနည်းစေတယ်။ ဒုက္ခနည်းပြီး အကျိုးများစေတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီမိုကရေစီထက် အက်ဆိုကရေစီစနစ်ကို ပိုပြီးသဘောကျတယ်....။ Mine coins - make money: http://bit.ly/money_crypto
at 5:41 AM Labels: ရသစာစု0comments
Major functions of Legislatur
Major functions of Legislature
(1) Representation of opinions & interest (ပြည်သူတို့၏ အကျိုးစီးပွား နှင့် အမြင်များကို ကိုယ်စားပြုရမယ်)
(2) Formulation of policy
(3) Control of finance
(4) Supervision of executive
(5) Enactment of law
at 7:21 PM Labels: လအက္ခရာ0comments
စာရင်းကိုင်ပညာနှင့်သက်ဆိုင်သော အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ဝေါဟာရများ
Accounting Period - စာရင်းကာလ
Assets - ရပိုင်ခွင့်များ
Account - စာရင်း
Adjusting Entries - စာရင်းညှိနှိုင်းခြင်း
Accumulated Fund - စုဆောင်းထား ရံပုံငွေ
Acceptor - ဘီလ်လက်ခံသောသူ
Accountancy - စာရင်းကိုင်ပညာ
Account Sales - ကုန်ရောင်း ရှင်းတမ်း
Accommodation Bills - ထောက်ပံ့ခြင်း ဘီလ်များ
Allocation - စာရင်းခွဲဝေခြင်း
Assets - ရရန်ပိုင်ခွင့်
Auditing - စာရင်းစစ်ပညာ
Authorized Capital - မှတ်ပုံတင်အစုအရင်းငွေ
Balance Sheet - လက်ကျန်ရှင်းတမ်း
Balance of the account - စာရင်းလက်ကျန်
Books of Prime Entry - ပထမသွင်း စာရင်းစာအုပ်
Books of Original Entry - အခြေခံသွင်းစာအုပ်
Bills Receivable Day Book - ရရန်ဘီမှတ်တမ်းစာအုပ်
Bills Payable Day Book - ပေးရန်ဘီမှတ်တမ်းစာအုပ်
Bank Statement - ဘဏ်ရှင်းတမ်း
Bank Reconciliation Statement - ဘဏ်စာရင်းနှင့် ကိုက်ညှိရှင်းတမ်း
Bills Receivable - ရရန်ဘီလ်များ
Bills of Exchange - ငွေလွှဲစာချုပ်
Bills Payable - ပေးရန်ဘီလ်များ
Bad Debts - ကြွေးလျော်များ
Bank Overdraft - ဘဏ်မှ ပိုထုတ်ငွေ
Bonus Shares - ဆုငွေ အစုများ
Book Keeping - စာရင်းရေးပညာ
Branch Accounts - ဆိုင်ခွဲ စာရင်းများ
Branch Profit & Loss Account - ဆိုင်ခွဲ အရှုံးအမြတ်စာရင်း
Capital - ရင်းနှီးငွေ
Creditor - မြီရှင်
Credit side - မြီရှင်ဘက်
Closing Entries - စာရင်းပိတ်ခြင်း
Cash Book - စာရင်းပိတ်ခြင်း
Credit Note - မြီရှင်လွှာ
Cash Receipts Journal - ရငွေဂျာနယ်
Cash Payments Journal - ပေးငွေဂျာနယ်
Compensating Errors - အချင်းချင်းနှိမ်သော အမှားများ
Capital Expenditure - မတည်ငွေအသုံးစရိတ်
Cost of Goods Sold - ရောင်းပြီး ကုန်တန်ဖိုး
Copyright - မူပိုင်
Current Assets - လက်ငင်းရပိုင်ခွင့်များ
Current Liabilities - လက်ငင်းပေးရန်တာဝန်များ
Cost of Goods Manufactured - ထုတ်လုပ်ပြီး ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုး
Cost - ကုန်ကျတန်ဖိုး
Control Account - ထိန်းချုပ်စာရင်း
Called Up Capital - ခေါ်ပြီး အစုအရင်းငွေ
Calls in Advance - ကြိုတင်ရ အခေါ်များ
Carriage Inwards - ကုန်သယ်ခ
Carriage Outwards - ကုန်ပို့ခ
Cash Discount - ငွေနှုန်းလျှော့
Cash Purchases - ကုန်လက်ငင်းဝယ်
Cash Sales - ကုန်လက်ငင်းရောင်း
Cheques - ဘဏ်ချက်ခေါ် ငွေထုတ်လက်မှတ်များ
Closing Stock - စာရင်းပိတ်ကုန်လက်ကျန်ရှင်းတမ်း
Columnar Balance Sheet - ဇယားကွက် လက်ကျန်ရှင်းတမ်း
Columnar Cash Book - ဇယားကွက် ငွေဝင်ငွေထွက် စာအုပ်
Consignment Inwards - ကုန်သွင်း ကုန်ရောင်း စာရင်း
Consignment Outwards - ကုန်ပို့ ကုန်ရောင်း စာရင်း
Control Accounts - အချုပ်စာရင်း၊ စာရင်းချုပ်များ
Credits - မြီရှင် စာရင်း
Credits Ledger - မြီရှင်များ စာရင်းစာအုပ်
Cumulative Preference Shares - အတိုးအပြည့်ပေးရသော အထူးအစုများ
Debit side - မြီစားဖက်
Double Entry Book-keeping - နှစ်ဖက်သွင်း စာရင်းရေး
Debit Note - မြီစားလွှာ
Deferred Expenses - ရွှေ့ဆိုင်းစရိတ်များ
Development Expenses - တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှု စရိတ်များ
Direct Material Cost - တိုက်ရိုက်ကုန်ကြမ်း စရိတ်
Direct Labor Cost - တိုက်ရိုက်လုပ်သားခ
Diminishing Balance Method - လက်ကျန်တဖြည်းဖြည်းကုန်ခြင်းနည်း
Debentures - ငွေချေး အစုများ
Debits - မြီစား စာရင်း
Debtors Ledger - မြီစားများ စာရင်းစာအုပ်
Deferred, Founders or Management Shares - နောက်ဆုံးအစုများ
Deferred Ordinary Shares - ဒုတိယ သာမန် အစုများ
Demand Drafts - ချက်ချင်းပေးသော ဘီလ်များ
Depreciation - တန်ဘိုးလျှော့
Directors Fees - ဒါရိုက်တာ ကြေးများ
Dividends - အစုပေါ် အမြတ်
Documentary Bills - ကုန်ရောင်း စာချုပ်ဘီလ်များ
Drawee - ဘီလ်လက်ခံသောသူ
Drawer - ဘီလ်ရေးဆွဲသောသူ
Errors of Omission - အလျင်းမေ့ကျန်အမှား
Errors of Commission - အရေးမှားများ
Errors of Principle - မူအရ အမှားများ
Expenditure - အသုံးစရိတ်
Expansion or Extension - တိုးချဲ့
Folio - အညွှန်း
Fixed Assets - ပုံသေရပိုင်ခွင့်များ
Fixed Liabilities - ပုံသေပေးရန် တာဝန်များ
Factory Cost - စက်ရုံထွက်တန်ဖိုး
Factory Overhead - စက်ရုံဝန်ဆောင် စရိတ်
Factory Supplies - စက်ရုံသုံးပစ္စည်းများ
Fixed Installment System - ပုံသေအရစ်ကျစနစ်
Factory Expenses - အလုပ်ရုံ စရိတ်များ
Factory Power - စက်ရုံအား
Finished Goods - ကုန်ချောများ
Forfeited Shares - ရုပ်သိမ်းသော အစုများ
Fuel & Power - မီးအား စက်အား
Gross Profit - အကြမ်းအမြတ်
Gross Loss - အကြမ်းအရှုံး
General Ledger - အထွေထွေလယ်ဂျာ
General Fund - အထွေထွေရံပုံငွေ
Goods on Consignment - ကုန်ပို့စာရင်း
Goodwill - ဆိုင်နာမည်
Hire Purchase - ငှါးဝယ်ခြင်း
Impersonal Account - ပုဂိုလ်မဟုတ်သောစာရင်း
Invoice - အရောင်းကုန်ပို့လွှာ
Imprest System - ပုံသေငွေပေးထားစနစ်
Improvements - မွမ်းမံ
Intangible - ဒြပ်မဲ့
Indirect Material - သွယ်ဝိုက်ကုန်ကြမ်းတန်ဖိုး
Indirect Labor - သွယ်ဝိုက်လုပ်သားခ
Income and Expenditure Account - ၀င်ငွေသုံးငွေစာရင်း
Imprest Cash - အသေးသုံးအတွက် ခေတ္တထုတ်ထားငွေ
Installments - အရစ်ကျ ပေးဝယ်ခြင်း
Interim Dividends - ကြားဖြတ် အစုပေါ် အမြတ်
Investments - အစုဝယ်များ
Issued & Subscribed Capital - ထုတ်ဝေပြီး အစု အရင်းငွေ
Joint Stock Companies - မှတ်ပုံတင် လူထုအစပ်အဆိုင်များ
Joint Venture - တွဲဘက်ရောင်းဝယ်စာရင်း၊ ဖက်စပ်စာရင်း
Journalize - စာရင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
Journalizing - ဂျာနယ်သွင်းခြင်း
Journal - ဂျာနယ်
Liabilities - ပေးရန်တာဝန်များ
Ledger - လယ်ဂျာ
Ledger Account - လယ်ဂျာစာရင်း
Loan on Mortgage - အပေါင်ခံချေးငွေ
Late Lodgments - မရှင်းသေးသောအချက်များ
Liquidation Account - ဆိုင်ပိတ်စာရင်း
Loose Tools - တူဆောက် လက်နက်များ
Manufacturing Account - ကုန်ကြမ်းအလုပ်ရုံစာရင်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်စာရင်း
Maintenance - ပြုပြင်
Medium of Exchange - အသိအမှတ်ပြု လဲလှယ်ခွင့်
Manufacturing - ကုန်ထုတ်လုပ်
Machine Hour System - စက်လည်ချိန်မှီးစနစ်
Net Profit - အသားတင်အမြတ်
Nominal Capital - အစွမ်းကုန် အစုအရင်းငွေ
Noting Stock - စာရင်းဖွင့် ကုန်လက်ကျန်
Net Loss - အသားတင်အရှုံး
Nominal Account - အမည်ခံစာရင်း
Net Worth - အသားတင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်
Opening Stock - စာရင်းဖွင့် ကုန်လက်ကျန်
Ordinary Shares - သာမန် အစုများ
Output - ကုန်ထွက်ပေါင်း
Operating & Administrative Expenses - လုပ်ဆောင်မှုနှင့် အုပ်ချုပ်မှု စရိတ်များ
Other Indirect Expenses - အခြားသွယ်ဝိုက်စရိတ်
Outstanding Expenses - ပေးရန်ရှိကုန်ကျစရိတ်
Outstanding Incomes - ရရန်ရှိဝင်ငွေ
Packing Expenses - ကုန်ထုတ်စရိတ်များ
Paid Up Capital - ငွေရပြီး အစုအရင်းငွေ
Patents & Copyrights - မူပိုင်များ
Payee - ငွေရမည့်သူ
Petty Cash Book - အသေးသုံး ငွေစာရင်း စာအုပ်
Posting - စာရင်းပို့ဆောင်ခြင်း
Preference Shares - အထူးအစုများ
Preferred Ordinary Shares - ပထမ သာမန် အစုများ
Preliminary Expenses - မူလဆိုင်ဖွင့်စရိတ်များ၊ ပဏာမစရိတ်များ
Premium on Shares - အစုပေါ် အပိုကြေး
Profit & Loss Account - အရှုံးအမြတ်စာရင်း
Profit & Loss Adjustment Account - အရှုံးအမြတ် ခုနှိမ်စာရင်း
Profit & Loss Appropriation Account - အမြတ်ခွဲဝေစာရင်း
Promissory Notes - ပရိုနုတ်ခေါ် ငွေလွှဲလက်မှတ် / ကတိစာချုပ်
Purchases Day Book - ကုန်ဝယ်စာရင်မှတ်တမ်း
Purchases Returns Book - ကုန်ဝယ်ပြန်ပို့ မှတ်တမ်းစာအုပ်
Profit & Loss Statement - အရှုံးအမြတ်ရှင်းတမ်း
Personal Account - ပုဂိုလ်စာရင်း
Purchase or Construction of Fixed Assets - ပုံသေပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း (သို့) ဆောက်လုပ်ခြင်း
Provision for Depreciation Account - တန်ဖိုးလျှော့ ရာထားစာရင်း
Provision for Bad Debts - ကြွေးဆုံးရာထား
Patents - ပိုင်ခွင့်ကန့်သတ်သည့် လက်မှတ်များ
Purchase Ledger - အ၀ယ်လယ်ဂျာ
Real Account - ပစ္စည်းစာရင်း
Revenue Expenditure - သာမန်အသုံးစရိတ်
Replacement - အစားထိုးခြင်း
Renewal - အသစ်လဲ
Repairs - ပြင်ဆင်
Reducing Installment Method - လျော့ဆင်းသော အရစ်ကျစနစ်
Revaluation - ပြန်လည်တန်ဖိုးဖြတ်
Receipts and Payments Accounts - စုငွေပေးငွေစာရင်း
Rate & Taxes - မြူနီစီပါယ်ကြေး
Raw Materials - ကုန်ကြမ်းများ
Realization Account - ဆိုင်ဖျက်သိမ်းစာရင်း
Rebates - ပြန်အမ်းငွေ
Redeemable Preference Shares - ပြန်သိမ်းနိုင်သော အထူးအစုများ
Registered Capital - မှတ်ပုံတင်အစုအရင်းငွေ
Reserves - သီးသန့်ရံပုံငွေ
Reserve for Bad & Doubtful Debts - ကြွေးလျော်ရံပုံငွေ
Reserves Capital - သီးသန့်ထားသော အစုအရင်းငွေ
Salaries - လစာများ
Sales Day Book - ကုန်ရောင်း စာရင်းမှတ်တမ်း
Sales Returns Book - ကုန်ရောင်း ပြန်သွင်း မှတ်တမ်းစာအုပ်
Shares Capital - အစုအရင်းငွေ
Sight Drafts - လဆိုင်းပေးဘီလ်များ
Single Entry Book-keeping - တဘက်သွင်းစာရင်းရေးနည်း
Subsidiary Ledgers - လက်ထောက်စာရင်း စာအုပ်များ
Summary - စာရင်းတူများ ပေါင်းပေးခြင်း
Service - ဆောင်ရွက်မှု
Special Journal - အထူးဂျာနယ်
Straight Line Method - မျဉ်းဖြောင့်နည်း
Sales Ledger - အရောင်းလယ်ဂျာ
Statement of Affairs - လုပ်ငန်းအခြေအနေပြရှင်းတမ်း
Trade Discounts - ကုန်သည်နှုန်းလျှော့
Trading Account - ကုန်ရောင်း ကုန်ဝယ်စာရင်း၊ အရောင်းအ၀ယ်စာရင်း
Transfer Fees - အစုလွှဲပြောင်းကြေး
Transfer Journal - စာရင်းအပြောင်းအလွှဲမှတ်တမ်း
Travelers Salaries - နယ်လှည့် အရောင်းသမားများလစာ
Trial Balance - အစမ်းရှင်းတမ်း
Turnover - ကုန်ရောင်းရငွေ
Tangible - ဒြပ်ရှိ
Taking outaTrial Balance - အစမ်းရှင်းတမ်းရေးဆွဲခြင်း
Trade Mark - ကုန်မှတ်တမ်းတံဆိပ်
Total Account - စုစုပေါင်းစာရင်း
Total Debtors Account - စုစုပေါင်းမြီးစားများစာရင်း
Total Creditors Account - စုစုပေါင်းမြီရှင်များစာရင်း
Uncalled Capital - မခေါ်ရသေးသော အစုအရင်းငွေ
Unclaimed Dividends - လာမယူသေးသော အမြတ်ငွေ
Unpaid Calls - မရသေးသောအခေါ်များ
Unpresented Cheques - ငွေလာ၍မထုတ်သေးသော ချက်များ
Unit of Performance Method - ထုတ်လုပ်ကုန်အရေအတွက်ဖြင့် တွက်နည်း
Wages - အလုပ်သမားအခများ
Warehouse Expenses - ကုန်ရုံစရိတ်များ
Work in Progress - မပြီးသေးသော အလုပ်များ/ လုပ်ဆဲကုန်
ပညာသင်နှစ်တစ်လျောက်စုဆောင်းမိထားတာလေး ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းပါဗျာ.. အဆင်ပြေပါစေနော်ဗျ.
Credit...မြန်မာနိူင်ငံစာရင်းကိုင်အသင်းနှင့် သင်ကြားခဲ့ သောဆရာဆရာမအားလုံးကိုဂါရ၀ပြုလျှက်
စာရငျးကိုငျပညာနှငျ့သကျဆိုငျသော အင်ျဂလိပျ-မွနျမာ ဝေါဟာရမြား
Accounting Period - စာရငျးကာလ
Assets - ရပိုငျခှငျ့မြား
Account - စာရငျး
Adjusting Entries - စာရငျးညှိနှိုငျးခွငျး
Accumulated Fund - စုဆောငျးထား ရံပုံငှေ
Acceptor - ဘီလျလကျခံသောသူ
Accountancy - စာရငျးကိုငျပညာ
Account Sales - ကုနျရောငျး ရှငျးတမျး
Accommodation Bills - ထောကျပံ့ခွငျး ဘီလျမြား
Allocation - စာရငျးခှဲဝေခွငျး
Assets - ရရနျပိုငျခှငျ့
Auditing - စာရငျးစဈပညာ
Authorized Capital - မှတျပုံတငျအစုအရငျးငှေ
Balance Sheet - လကျကနျြရှငျးတမျး
Balance of the account - စာရငျးလကျကနျြ
Books of Prime Entry - ပထမသှငျး စာရငျးစာအုပျ
Books of Original Entry - အခွခေံသှငျးစာအုပျ
Bills Receivable Day Book - ရရနျဘီမှတျတမျးစာအုပျ
Bills Payable Day Book - ပေးရနျဘီမှတျတမျးစာအုပျ
Bank Statement - ဘဏျရှငျးတမျး
Bank Reconciliation Statement - ဘဏျစာရငျးနှငျ့ ကိုကျညှိရှငျးတမျး
Bills Receivable - ရရနျဘီလျမြား
Bills of Exchange - ငှလှေဲစာခြုပျ
Bills Payable - ပေးရနျဘီလျမြား
Bad Debts - ကွှေးလြျောမြား
Bank Overdraft - ဘဏျမှ ပိုထုတျငှေ
Bonus Shares - ဆုငှေ အစုမြား
Book Keeping - စာရငျးရေးပညာ
Branch Accounts - ဆိုငျခှဲ စာရငျးမြား
Branch Profit & Loss Account - ဆိုငျခှဲ အရှုံးအမွတျစာရငျး
Capital - ရငျးနှီးငှေ
Creditor - မွီရှငျ
Credit side - မွီရှငျဘကျ
Closing Entries - စာရငျးပိတျခွငျး
Cash Book - စာရငျးပိတျခွငျး
Credit Note - မွီရှငျလှာ
Cash Receipts Journal - ရငှဂြောနယျ
Cash Payments Journal - ပေးငှဂြောနယျ
Compensating Errors - အခငျြးခငျြးနှိမျသော အမှားမြား
Capital Expenditure - မတညျငှအေသုံးစရိတျ
Cost of Goods Sold - ရောငျးပွီး ကုနျတနျဖိုး
Copyright - မူပိုငျ
Current Assets - လကျငငျးရပိုငျခှငျ့မြား
Current Liabilities - လကျငငျးပေးရနျတာဝနျမြား
Cost of Goods Manufactured - ထုတျလုပျပွီး ကုနျပစ်စညျးတနျဖိုး
Cost - ကုနျကတြနျဖိုး
Control Account - ထိနျးခြုပျစာရငျး
Called Up Capital - ချေါပွီး အစုအရငျးငှေ
Calls in Advance - ကွိုတငျရ အချေါမြား
Carriage Inwards - ကုနျသယျခ
Carriage Outwards - ကုနျပို့ခ
Cash Discount - ငှနှေုနျးလြှော့
Cash Purchases - ကုနျလကျငငျးဝယျ
Cash Sales - ကုနျလကျငငျးရောငျး
Cheques - ဘဏျခကျြချေါ ငှထေုတျလကျမှတျမြား
Closing Stock - စာရငျးပိတျကုနျလကျကနျြရှငျးတမျး
Columnar Balance Sheet - ဇယားကှကျ လကျကနျြရှငျးတမျး
Columnar Cash Book - ဇယားကှကျ ငှဝေငျငှထှေကျ စာအုပျ
Consignment Inwards - ကုနျသှငျး ကုနျရောငျး စာရငျး
Consignment Outwards - ကုနျပို့ ကုနျရောငျး စာရငျး
Control Accounts - အခြုပျစာရငျး၊ စာရငျးခြုပျမြား
Credits - မွီရှငျ စာရငျး
Credits Ledger - မွီရှငျမြား စာရငျးစာအုပျ
Cumulative Preference Shares - အတိုးအပွညျ့ပေးရသော အထူးအစုမြား
Debit side - မွီစားဖကျ
Double Entry Book-keeping - နှဈဖကျသှငျး စာရငျးရေး
Debit Note - မွီစားလှာ
Deferred Expenses - ရှဆေို့ငျးစရိတျမြား
Development Expenses - တိုးတကျဖှံ့ဖွိုးမှု စရိတျမြား
Direct Material Cost - တိုကျရိုကျကုနျကွမျး စရိတျ
Direct Labor Cost - တိုကျရိုကျလုပျသားခ
Diminishing Balance Method - လကျကနျြတဖွညျးဖွညျးကုနျခွငျးနညျး
Debentures - ငှခြေေး အစုမြား
Debits - မွီစား စာရငျး
Debtors Ledger - မွီစားမြား စာရငျးစာအုပျ
Deferred, Founders or Management Shares - နောကျဆုံးအစုမြား
Deferred Ordinary Shares - ဒုတိယ သာမနျ အစုမြား
Demand Drafts - ခကျြခငျြးပေးသော ဘီလျမြား
Depreciation - တနျဘိုးလြှော့
Directors Fees - ဒါရိုကျတာ ကွေးမြား
Dividends - အစုပျေါ အမွတျ
Documentary Bills - ကုနျရောငျး စာခြုပျဘီလျမြား
Drawee - ဘီလျလကျခံသောသူ
Drawer - ဘီလျရေးဆှဲသောသူ
Errors of Omission - အလငျြးမကေ့နျြအမှား
Errors of Commission - အရေးမှားမြား
Errors of Principle - မူအရ အမှားမြား
Expenditure - အသုံးစရိတျ
Expansion or Extension - တိုးခြဲ့
Folio - အညှနျး
Fixed Assets - ပုံသရေပိုငျခှငျ့မြား
Fixed Liabilities - ပုံသပေေးရနျ တာဝနျမြား
Factory Cost - စကျရုံထှကျတနျဖိုး
Factory Overhead - စကျရုံဝနျဆောငျ စရိတျ
Factory Supplies - စကျရုံသုံးပစ်စညျးမြား
Fixed Installment System - ပုံသအေရဈကစြနဈ
Factory Expenses - အလုပျရုံ စရိတျမြား
Factory Power - စကျရုံအား
Finished Goods - ကုနျခြောမြား
Forfeited Shares - ရုပျသိမျးသော အစုမြား
Fuel & Power - မီးအား စကျအား
Gross Profit - အကွမျးအမွတျ
Gross Loss - အကွမျးအရှုံး
General Ledger - အထှထှေလေယျဂြာ
General Fund - အထှထှေရေံပုံငှေ
Goods on Consignment - ကုနျပို့စာရငျး
Goodwill - ဆိုငျနာမညျ
Hire Purchase - ငှါးဝယျခွငျး
Impersonal Account - ပုဂိုလျမဟုတျသောစာရငျး
Invoice - အရောငျးကုနျပို့လှာ
Imprest System - ပုံသငှေပေေးထားစနဈ
Improvements - မှမျးမံ
Intangible - ဒွပျမဲ့
Indirect Material - သှယျဝိုကျကုနျကွမျးတနျဖိုး
Indirect Labor - သှယျဝိုကျလုပျသားခ
Income and Expenditure Account - ၀ငျငှသေုံးငှစောရငျး
Imprest Cash - အသေးသုံးအတှကျ ခတ်ေတထုတျထားငှေ
Installments - အရဈကြ ပေးဝယျခွငျး
Interim Dividends - ကွားဖွတျ အစုပျေါ အမွတျ
Investments - အစုဝယျမြား
Issued & Subscribed Capital - ထုတျဝေပွီး အစု အရငျးငှေ
Joint Stock Companies - မှတျပုံတငျ လူထုအစပျအဆိုငျမြား
Joint Venture - တှဲဘကျရောငျးဝယျစာရငျး၊ ဖကျစပျစာရငျး
Journalize - စာရငျးမှတျတမျးတငျခွငျး
Journalizing - ဂြာနယျသှငျးခွငျး
Journal - ဂြာနယျ
Liabilities - ပေးရနျတာဝနျမြား
Ledger - လယျဂြာ
Ledger Account - လယျဂြာစာရငျး
Loan on Mortgage - အပေါငျခံခြေးငှေ
Late Lodgments - မရှငျးသေးသောအခကျြမြား
Liquidation Account - ဆိုငျပိတျစာရငျး
Loose Tools - တူဆောကျ လကျနကျမြား
Manufacturing Account - ကုနျကွမျးအလုပျရုံစာရငျး၊ ကုနျထုတျလုပျစာရငျး
Maintenance - ပွုပွငျ
Medium of Exchange - အသိအမှတျပွု လဲလှယျခှငျ့
Manufacturing - ကုနျထုတျလုပျ
Machine Hour System - စကျလညျခြိနျမှီးစနဈ
Net Profit - အသားတငျအမွတျ
Nominal Capital - အစှမျးကုနျ အစုအရငျးငှေ
Noting Stock - စာရငျးဖှငျ့ ကုနျလကျကနျြ
Net Loss - အသားတငျအရှုံး
Nominal Account - အမညျခံစာရငျး
Net Worth - အသားတငျပိုငျဆိုငျခှငျ့
Opening Stock - စာရငျးဖှငျ့ ကုနျလကျကနျြ
Ordinary Shares - သာမနျ အစုမြား
Output - ကုနျထှကျပေါငျး
Operating & Administrative Expenses - လုပျဆောငျမှုနှငျ့ အုပျခြုပျမှု စရိတျမြား
Other Indirect Expenses - အခွားသှယျဝိုကျစရိတျ
Outstanding Expenses - ပေးရနျရှိကုနျကစြရိတျ
Outstanding Incomes - ရရနျရှိဝငျငှေ
Packing Expenses - ကုနျထုတျစရိတျမြား
Paid Up Capital - ငှရေပွီး အစုအရငျးငှေ
Patents & Copyrights - မူပိုငျမြား
Payee - ငှရေမညျ့သူ
Petty Cash Book - အသေးသုံး ငှစောရငျး စာအုပျ
Posting - စာရငျးပို့ဆောငျခွငျး
Preference Shares - အထူးအစုမြား
Preferred Ordinary Shares - ပထမ သာမနျ အစုမြား
Preliminary Expenses - မူလဆိုငျဖှငျ့စရိတျမြား၊ ပဏာမစရိတျမြား
Premium on Shares - အစုပျေါ အပိုကွေး
Profit & Loss Account - အရှုံးအမွတျစာရငျး
Profit & Loss Adjustment Account - အရှုံးအမွတျ ခုနှိမျစာရငျး
Profit & Loss Appropriation Account - အမွတျခှဲဝေစာရငျး
Promissory Notes - ပရိုနုတျချေါ ငှလှေဲလကျမှတျ / ကတိစာခြုပျ
Purchases Day Book - ကုနျဝယျစာရငျမှတျတမျး
Purchases Returns Book - ကုနျဝယျပွနျပို့ မှတျတမျးစာအုပျ
Profit & Loss Statement - အရှုံးအမွတျရှငျးတမျး
Personal Account - ပုဂိုလျစာရငျး
Purchase or Construction of Fixed Assets - ပုံသပေစ်စညျးဝယျယူခွငျး (သို့) ဆောကျလုပျခွငျး
Provision for Depreciation Account - တနျဖိုးလြှော့ ရာထားစာရငျး
Provision for Bad Debts - ကွှေးဆုံးရာထား
Patents - ပိုငျခှငျ့ကနျ့သတျသညျ့ လကျမှတျမြား
Purchase Ledger - အ၀ယျလယျဂြာ
Real Account - ပစ်စညျးစာရငျး
Revenue Expenditure - သာမနျအသုံးစရိတျ
Replacement - အစားထိုးခွငျး
Renewal - အသဈလဲ
Repairs - ပွငျဆငျ
Reducing Installment Method - လြော့ဆငျးသော အရဈကစြနဈ
Revaluation - ပွနျလညျတနျဖိုးဖွတျ
Receipts and Payments Accounts - စုငှပေေးငှစောရငျး
Rate & Taxes - မွူနီစီပါယျကွေး
Raw Materials - ကုနျကွမျးမြား
Realization Account - ဆိုငျဖကျြသိမျးစာရငျး
Rebates - ပွနျအမျးငှေ
Redeemable Preference Shares - ပွနျသိမျးနိုငျသော အထူးအစုမြား
Registered Capital - မှတျပုံတငျအစုအရငျးငှေ
Reserves - သီးသနျ့ရံပုံငှေ
Reserve for Bad & Doubtful Debts - ကွှေးလြျောရံပုံငှေ
Reserves Capital - သီးသနျ့ထားသော အစုအရငျးငှေ
Salaries - လစာမြား
Sales Day Book - ကုနျရောငျး စာရငျးမှတျတမျး
Sales Returns Book - ကုနျရောငျး ပွနျသှငျး မှတျတမျးစာအုပျ
Shares Capital - အစုအရငျးငှေ
Sight Drafts - လဆိုငျးပေးဘီလျမြား
Single Entry Book-keeping - တဘကျသှငျးစာရငျးရေးနညျး
Subsidiary Ledgers - လကျထောကျစာရငျး စာအုပျမြား
Summary - စာရငျးတူမြား ပေါငျးပေးခွငျး
Service - ဆောငျရှကျမှု
Special Journal - အထူးဂြာနယျ
Straight Line Method - မဉျြးဖွောငျ့နညျး
Sales Ledger - အရောငျးလယျဂြာ
Statement of Affairs - လုပျငနျးအခွအေနပွေရှငျးတမျး
Trade Discounts - ကုနျသညျနှုနျးလြှော့
Trading Account - ကုနျရောငျး ကုနျဝယျစာရငျး၊ အရောငျးအ၀ယျစာရငျး
Transfer Fees - အစုလှဲပွောငျးကွေး
Transfer Journal - စာရငျးအပွောငျးအလှဲမှတျတမျး
Travelers Salaries - နယျလှညျ့ အရောငျးသမားမြားလစာ
Trial Balance - အစမျးရှငျးတမျး
Turnover - ကုနျရောငျးရငှေ
Tangible - ဒွပျရှိ
Taking outaTrial Balance - အစမျးရှငျးတမျးရေးဆှဲခွငျး
Trade Mark - ကုနျမှတျတမျးတံဆိပျ
Total Account - စုစုပေါငျးစာရငျး
Total Debtors Account - စုစုပေါငျးမွီးစားမြားစာရငျး
Total Creditors Account - စုစုပေါငျးမွီရှငျမြားစာရငျး
Uncalled Capital - မချေါရသေးသော အစုအရငျးငှေ
Unclaimed Dividends - လာမယူသေးသော အမွတျငှေ
Unpaid Calls - မရသေးသောအချေါမြား
Unpresented Cheques - ငှလော၍မထုတျသေးသော ခကျြမြား
Unit of Performance Method - ထုတျလုပျကုနျအရအေတှကျဖွငျ့ တှကျနညျး
Wages - အလုပျသမားအခမြား
Warehouse Expenses - ကုနျရုံစရိတျမြား
Work in Progress - မပွီးသေးသော အလုပျမြား/ လုပျဆဲကုနျ
ပညာသငျနှဈတဈလြောကျစုဆောငျးမိထားတာလေး ပွနျလညျမြှဝေပေးခွငျးပါဗြာ.. အဆငျပွပေါစနေျောဗြ.
Credit...မွနျမာနိူငျငံစာရငျးကိုငျအသငျးနှငျ့ သငျကွားခဲ့ သောဆရာဆရာမအားလုံးကိုဂါရ၀ပွုလြှကျ
at 9:17 AM Labels: စီးပွား​ရေး0comments
စာရင်းကိုင်တစ်ယောက်က တောင်းဆိုသွားတဲ့အတွက် ရှာဖွေတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ကျနော်လည်း ဝေါဟာရတွေကို မြန်မာလို မေ့နေပါပြီ ၊ ကျနော်မေ့သွားတာ (ဒါမှမဟုတ်) မသိတဲ့စာလုံးလေးတွေကို မြန်မာလို ပြောပေးကြပါဦးနော်
(1) An accountant orabookkeeper is an individual who performs accounting tasks for individuals or companies.
စာရင်းကိုင်တစ်ယောက် (သို့) စာရင်းထိန်းတစ်ယောက် ဟာ တစ်ဦးချင်း(လုပ်ငန်း)များ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီများအတွက် စာရင်းကိုင်ခြင်းတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်သူ တစ်ဦးဦးဖြစ်ပါတယ်
(2) The accountant handles financial records, taxes, and is responsible for issuing of financial reports.
စာရင်းကိုင်တစ်ယောက်ဟာ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများ အခွန်များ ကို ကိုင်တွယ်ပါတယ် ၊ ပြီးတော့ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများ ထုတ်ပေးခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိပါတယ်
(3) An auditor isaprofessional who is responsible for evaluating some specific aspects ofaproject, business, or individual.
စာရင်းစစ်တစ်ယောက်ဟာ စီမံချက်တစ်ခု ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း (သို့) တစ်ဦးချင်းစီ ရဲ့ ခိုင်လုံတိကျတဲ့ အမြင်သဘောထား အချို့ကို တန်ဘိုးဖြတ်စစ်ဆေးခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိသူ ကျွမ်းကျင်သောပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်
(4) Accounting is the recording of financial transactions plus storing, sorting, retrieving, summarizing, and presenting the information in various reports and analyses.
စာရင်းကိုင်ခြင်းဆိုတာက ငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ၊ ထပ်ပေါင်းပြီး … သိမ်းဆည်းခြင်း ၊ ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်း ၊ အနှစ်ချုပ်ခြင်း နှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို အမျိုးမျိုးကွဲပြားသော အစီရင်ခံစာများ စိစစ်ချက်များနဲ့ တင်ပြခြင်း တို့ ပါဝင်ပါတယ်
(5) An annual report isacomprehensive (complete) report onacompany’s activities throughout the preceding (previous) year.
နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာတစ်စောင် ဆိုတာဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တစ်လျှောက်လုံး ကုမ္ပဏီရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုများအပေါ် ပြည့်စုံတဲ့ အစီရင်ခံစာ တစ်စောင် ဖြစ်ပါတယ်
(6) Annual reports are intended to give shareholders and other people interested in information about the company’s activities and financial performance.
နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာတွေဟာ အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ နဲ့ … ကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်ဆောင်မှုများနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များနဲ့စပ်လျဉ်းတဲ့ သတင်းအချက်အလက်များကို စိတ်စားစားသူများ .. ကို ပေးဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်
(7) An income statement, profit and loss statement (P&L), statement of financial performance, statement of operations: These terms are all used to designateacompany’s financial statement.
၀င်ငွေစာရင်းချုပ် ၊ အရှံးအမြတ်စာရင်းချုပ် ၊ ငွေကြေးဆောင်ရွက်မှုစာရင်းချုပ် ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစာရင်းချုပ်..ဒီဝေါဟာရများအားလုံးကို ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စာရင်းချုပ်ကို သတ်မှတ်ဖေါ်ပြဖို့အတွက် အသုံးပြုပါတယ်
ဝေါဟာရတွေက ရေးရမှာ များလို့ Dictionary မှာပဲ ကြည့်လ်ိုက်စေချင်ပါတော့တယ်
စာရင်းကိုင်မှာ LCCI လိုမျိုး အင်္ဂလိပ်လို သင်တဲ့သင်တန်းတွေ တက်ရောက်ထားတဲ့သူတွေကျတော့ ဝေါဟာရအားလုံး မြန်မာလို လုံးချင်း လုံးကောက် ဘာသာမပြန်တတ်ပဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ၊ မြန်မာလို တက်ထားတဲ့သူကျပြန်တော့ အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရတွေကို မသိပဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ၊ ကျနော်လည်း မသိတာတွေမေးရပါဦးမယ် ..အခုကတော့ နှစ်မျိုးလုံးမသိပဲနဲ့ ရမ်းတုတ် မှန်းတုတ် ထားတာလေးတွေပါ
စာရငျးကိုငျတဈယောကျက တောငျးဆိုသှားတဲ့အတှကျ ရှာဖှတေငျဆကျလိုကျခွငျးဖွဈပါတယျ ကနြျောလညျး ဝေါဟာရတှကေို မွနျမာလို မနေ့ပေါပွီ ၊ ကနြျောမသှေ့ားတာ (ဒါမှမဟုတျ) မသိတဲ့စာလုံးလေးတှကေို မွနျမာလို ပွောပေးကွပါဦးနျော
စာရငျးကိုငျတဈယောကျ (သို့) စာရငျးထိနျးတဈယောကျ ဟာ တဈဦးခငျြး(လုပျငနျး)မြား သို့မဟုတျ ကုမ်ပဏီမြားအတှကျ စာရငျးကိုငျခွငျးတာဝနျကို ထမျးဆောငျသူ တဈဦးဦးဖွဈပါတယျ
စာရငျးကိုငျတဈယောကျဟာ ဘဏ်ဏ္ဍာရေးဆိုငျရာ မှတျတမျးမြား အခှနျမြား ကို ကိုငျတှယျပါတယျ ၊ ပွီးတော့ ဘဏ်ဏ္ဍာရေးဆိုငျရာ အစီရငျခံစာမြား ထုတျပေးခွငျးအတှကျ တာဝနျရှိပါတယျ
စာရငျးစဈတဈယောကျဟာ စီမံခကျြတဈခု ၊ စီးပှားရေး လုပျငနျး (သို့) တဈဦးခငျြးစီ ရဲ့ ခိုငျလုံတိကတြဲ့ အမွငျသဘောထား အခြို့ကို တနျဘိုးဖွတျစဈဆေးခွငျးအတှကျ တာဝနျရှိသူ ကြှမျးကငျြသောပညာရှငျ တဈဦးဖွဈပါတယျ
စာရငျးကိုငျခွငျးဆိုတာက ငှကွေေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားကိုမှတျတမျးတငျခွငျး ဖွဈပါတယျ ၊ ထပျပေါငျးပွီး … သိမျးဆညျးခွငျး ၊ ပွနျလညျထုတျယူခွငျး ၊ အနှဈခြုပျခွငျး နှငျ့ သတငျးအခကျြအလကျမြားကို အမြိုးမြိုးကှဲပွားသော အစီရငျခံစာမြား စိစဈခကျြမြားနဲ့ တငျပွခွငျး တို့ ပါဝငျပါတယျ
နှဈပတျလညျ အစီရငျခံစာတဈစောငျ ဆိုတာဟာ လှနျခဲ့တဲ့နှဈတဈလြှောကျလုံး ကုမ်ပဏီရဲ့ လုပျဆောငျမှုမြားအပျေါ ပွညျ့စုံတဲ့ အစီရငျခံစာ တဈစောငျ ဖွဈပါတယျ
နှဈပတျလညျ အစီရငျခံစာတှဟော အစုရှယျယာပိုငျရှငျမြား နဲ့ … ကုမ်ပဏီရဲ့လုပျဆောငျမှုမြားနဲ့ ဘဏ်ဏ္ဍာရေးဆိုငျရာ ဆောငျရှကျခကျြမြားနဲ့စပျလဉျြးတဲ့ သတငျးအခကျြအလကျမြားကို စိတျစားစားသူမြား .. ကို ပေးဖို့ရညျရှယျပါတယျ
၀ငျငှစောရငျးခြုပျ ၊ အရှံးအမွတျစာရငျးခြုပျ ၊ ငှကွေေးဆောငျရှကျမှုစာရငျးခြုပျ ၊ လုပျငနျးဆောငျရှကျမှုစာရငျးခြုပျ..ဒီဝေါဟာရမြားအားလုံးကို ကုမ်ပဏီတဈခုရဲ့ဘဏ်ဏ္ဍာရေးဆိုငျရာ စာရငျးခြုပျကို သတျမှတျဖျေါပွဖို့အတှကျ အသုံးပွုပါတယျ
ဝေါဟာရတှကေ ရေးရမှာ မြားလို့ Dictionary မှာပဲ ကွညျ့လျိုကျစခေငျြပါတော့တယျ
စာရငျးကိုငျမှာ LCCI လိုမြိုး အင်ျဂလိပျလို သငျတဲ့သငျတနျးတှေ တကျရောကျထားတဲ့သူတှကေတြော့ ဝေါဟာရအားလုံး မွနျမာလို လုံးခငျြး လုံးကောကျ ဘာသာမပွနျတတျပဲ ဖွဈတတျပါတယျ ၊ မွနျမာလို တကျထားတဲ့သူကပြွနျတော့ အင်ျဂလိပျဝေါဟာရတှကေို မသိပဲ ဖွဈတတျပါတယျ ၊ ကနြျောလညျး မသိတာတှမေေးရပါဦးမယျ ..အခုကတော့ နှဈမြိုးလုံးမသိပဲနဲ့ ရမျးတုတျ မှနျးတုတျ ထားတာလေးတှပေါ
at 9:46 AM Labels: စီးပွား​ရေး0comments
.•°*”˜˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙အကြောင်းအမျိုးကြောင့်ဆက်သွယ်လိုလျှင်.•°*”˜˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
ရွှေအိမ်စည် စာကြည့်တိုက်အား Android ဖုန်းများမှ အလွယ်တကူဝင်ရောက် ဖတ်ရှူ့ နိုင်ရန်အတွက် apk ဖိုင်လေးပြုလုပ်ထားပါသည် (offline) ဖြင့်ကြည့်ရှူ့နိုင်ပါတယ် Android ဖုန်းအသုံးပြုကြတဲ့ စာချစ်သူအားလုံး... အောက်မှာဒေါင်းယူပြီး မိမိဖုန်းမှာ install ပြုလုပ်၍ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှူ့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ငါတို့ဖြစ်ရ ဤလောက၀ယ် ဘ၀သမိုင်း မရိုင်းစေရန်တို့သာသနာ တို့ပြည်ရွာကို သာယာစေမှု လုံ့လပြုအံ့။